थप दुई जनाकोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ ०५:४०:५८
शुक्रवार, भदौ १२, २०७७ नेपालबोट समाचारदाता
काठमाडौं । धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थपदुई जनाकोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
झापाको दमक–३ घर भएका ८३ वर्षका एक जनापुरुष र मोरङको बेलबारी–५ का ५६ वर्षका एक जना महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिए । ८३ वर्षका पुरुष बी एण्ड सी टिचिङ अस्पताल विर्तामोड झापाबाट रेफर भएर धरान स्थित प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए ।
उनमा अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो । साथै उनी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अल्प रक्तकोशिका र मिर्गौलाको दीर्घकालीन समस्याबाट पनि पीडित रहेको उनको अस्पतालमै डायलायसिस गरिएको डा. सापकोटाले जानकारी दिए । उनमा भदौ ३ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यस्तै ५६ वर्षका महिला कोशी अञ्चल अस्पतालबाट रेफर भएर प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको र उनमा पनि अत्यधिक खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । ती महिलामा भदौ ९ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियोे ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, भदौ १२, २०७७, ०९:०८:००